Ukuhlolwa ERashiya: KweeBhayibhile ZesiOssetia, EzesiRashiya Nezinye Iincwadi
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiBhulu IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHungary IsiJamani IsiKinyarwanda IsiKorea IsiLithuania IsiNgesi IsiNorway IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTurkish IsiUkrainian IsiXhosa
JANUWARI 14, 2016
Amagosa Erhafu ERashiya Athatha IiBhayibhile Neencwadi ZeBhayibhile Ebezithunyelwa Kwelo
Kule minyaka idlulileyo, abasemagunyeni eRashiya bathathe elinye inyathelo ukuze benze kube nzima ukunqula ngokukhululekileyo, ngokuthi bangavumeli iiBhayibhile zamaNgqina ukuba zingene kwelo. AmaNgqina othuswe kukuva ukuba iOfisi yeRhafu yaseVyborg ithi iiBhayibhile zawo zinobungozi. Le nto ichane kakhulu kungekuphela nje amaNgqina kodwa nabantu baseRashiya, abajonga iBhayibhile njengencwadi engcwele nebalulekileyo kwinkolo yabo.
Izityholo Ezothusayo NgeBhayibhile
NgoJulayi 13, 2015, amagosa erhafu eRashiya akuyekisa ukungeniswa kweNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele eziyi-2 013 zesiRashiya kumda wedolophu iVyborg. * La magosa athatha ezintathu kwezi Bhayibhile, azithumela kwingcali ukuze zihlolwe ukuba zithetha ngendlela eyingozi na aze azigcina ezinye. NgoAgasti la magosa abeka isebe lamaNgqina kaYehova laseFinland ityala lokwaphula umthetho karhulumente (njengelithumela iincwadi eRashiya).
Ngaphambili, ngoMeyi 5, 2015, amagosa erhafu athatha iincwadi ezazithunyelwa kwelo, kuzo kwakukho iiBhayibhile zesiOssetia ezipapashwe ngamaNgqina KaYehova. Le nto yawachana kakhulu amaKristu aseRashiya athetha isiOssetia, kuba iNguqulelo Yehlabathi Elitsha kuphela kweBhayibhile epheleleyo ngesiOssetia.
Nangona abasemagunyeni eRashiya ngaphambili bawusebenzisa kakubi kumaNgqina KaYehova umthetho ophathelele ukwenza imisebenzi eyingozi, bekuqala ngqa ukuba abasemagunyeni bathi inguqulelo yeBhayibhile inobungozi. * Ukuba iinkundla zizifumana zinobungozi nyhani ezi Bhayibhile, ziza kuyeka ukusasazwa eRashiya.
Ukuyekiswa Okungekho Mthethweni Kokungeniswa Kwezinye Iincwadi
Ezinye iincwadi akuvunyelwa ukuba zingene
Ukongezelela ekuyekiseni iiBhayibhile ukuba zingene eRashiya, amagosa erhafu ayekise nezinye iincwadi ukususela ngoMatshi 2015. * Abasemagunyeni benza ngendlela efanayo sihlandlo ngasinye kusibakho izinto ezingenayo. Baqale ngokwenza into engekho mthethweni ngokuthi bakhangele iincwadi ukuze ziyokuhlolwa yingcali, emva koko iofisi yomtshutshisi yafuna ukuba zijongwe njengeziyingozi. La madabi enkundla akaphepheki, ngenxa yokuba sihlandlo ngasinye kuzokuthunyelwa izinto kwelo kufuneka ibe yinkundla ekuvumayo oko.
Ngelizama ukuba azifumane izinto ezithunyelwe kuwo, amaNgqina KaYehova abonisa amagosa erhafu oko kuhle kugqitywe zinkundla, iziphumo zohlolisiso lwengcali namanye amaxwebhu ukuze la magosa azi ukuba urhulumente uzifumanise zingenabungozi iincwadi zawo. Sekunjalo, la magosa abubethe ngoyaba obu bungqina aze azithatha ezi zinto.
Ukungavunyelwa kweencwadi zamaNgqina eziprintiweyo ukuba zingene ngaphakathi eRashiya kubangele ukuba kube nzima ukufunda neze-elektroniki. NgoJulayi 21, 2015, iRashiya ibe lilizwe lokuqala ehlabathini lonke ukuyekisa ijw.org—iwebhsayithi yamaNgqina KaYehova. Iinkampani zeintanethi kulo lonke elaseRashiya ziyivalile le webhsayithi kwaye nabani na ongena kuyo uyabanjwa.
Ukuvalwa kwale webhsayithi kubangele kwanzima kumaNgqina ukuba afumane iincwadi ze-elektroniki, yaye oku kubachane ngakumbi amaNgqina angavayo nangaboniyo. Ngenxa yokuba iBhayibhile iyeyona nto ibalulekileyo kumaNgqina, ukuyekiswa ukungenisa iincwadi zawo kuphazamisa ukukhonza kwawo.
AmaNgqina KaYehova Acela Ukuba Injongo Yawo Iphumelele
Iinkundla zaseRashiya ziye zazikhaba iinzame ebezikho zokuyekisa nezinye iincwadi ezijongwa njengezingcwele. Ngo-2011, inkundla yaseRashiya eTomsk ayivumanga ukuyekisa inguqulelo yesiHindu Bhagavad Gita. Ngo-2013, isicelo esenziwe enkundleni sibangele ukuba satshintsha isigqibo sokuba iKoran iyingozi.
AmaNgqina KaYehova anethemba lokuba iinkundla zaseRashiya ziza kuzikhaba izimangalo ezingekho ngqiqweni ezenziwe ngamagosa erhafu zokuba iBhayibhile yawo iyingozi, zize ziyalele ukuba iiBhayibhile zawo nezinye iincwadi zawo zivunyelwe ukuba zisasazwe.
Amaxesha Ekungavunywanga Ngawo Ukuba Kungene Iincwadi eRashiya
NgoMatshi 1, 2015
Amagosa erhafu akavumanga ukuba zingene iincwadi yaye ngokungekho mthethweni athatha ezinye zazo.
NgoMeyi 4, 2015
Abasemagunyeni abavumanga ukuba zingene iincwadi eRashiya. Emva koko bawuhlola lo mthwalo baza bathatha izinto eziliqela, kuquka iiBhayibhile zesiOssetia ukuze zihlolwe ukuba azinabungozi na.
NgoMeyi 28, 2015
Iinkundla zanika iziko leengcali laseSt. Petersburg iincwadi ezazifike ngoMatshi 1, 2015, ukuze lenze uphando.
Amagosa erhafu kumda waseVyborg akavumi ukuba imithwalo emibini eneencwadi ukuba ingene.
NgoJulayi 13, 2015
Amagosa erhafu akavumi ukuba iiBhayibhile zesiRashiya ukuba zingene.
NgoAgasti 13, 2015
Amagosa erhafu eVyborg agwebe ngelithi aza kuzixutha iiBhayibhile eziyi-2 013 ezafika ngoJulayi 13, esithi zinobungozi. Amagosa abeke isebe lamaNgqina kaYehova laseFinland ityala lokwaphula umthetho karhulumente.
NgoSeptemba 1, 2015
Xa bekuxoxwa ityala ngezinto ebezifike ngoMeyi 4, iiBhayibhile zesiOssetia nezinye iincwadi, ijaji ayiwavumelanga amaNgqina ukuba azisasaze yaza yathintela amagqwetha awo ukuba enze amazwi okugqibela enkundleni.
Ngo-Oktobha 30, 2015
Inkundla Yedolophu YaseVyborg igwebe ngelithi amagosa erhafu enza into engekho mthethweni xa akhangela izinto ezafika ngoMeyi 4.
NgoNovemba 17, 2015
Inkundla ikumisile ukuxoxwa kwetyala ngezinto ezafika ngoJulayi 13 yaza yachithakala.
^ isiqe. 4 INguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele yinguqulelo yeBhayibhile epapashwe ngamaNgqina KaYehova, ayinika abantu simahla yaye ifumaneka ngeelwimi eziyi-120.
^ isiqe. 6 Ukususela ngoJanuwari 1, 2016, iinkundla zaseRashiya zigwebe ngelithi iincwadi zamaNgqina KaYehova eziyi-82 zinobungozi. AmaNgqina ayaziphikisa ezi zigqibo, kokubini kwiinkundla zasekuhlaleni nakwiiNkundla ZaseYurophu Ezilwela Amalungelo Abantu.
^ isiqe. 8 Ukususela ngoDisemba 2015, amagosa erhafu aseVyborg akavumanga ukuba imithwalo esixhenxe ebisiya kumaNgqina KaYehova aseRashiya ukuba ingene kwelo.
Umthetho waseRashiya uthi, ukuxuthwa nokugocagocwa kwezinto ezifikayo kufuna imvume yenkundla yaye kufuneka kubekho abameli bamacala omabini ukuze kuphendulwe imibuzo ngazo. Kuzo zonke ezi zihlandlo, amagosa erhafu awophule lo mthetho.
Abasemagunyeni Abajongene Nezinto Ezingenayo Neziphumayo Abazivumeli IiBhayibhile Ukuba Zingeniswe ERashiya